Martin Vrijland ọ na-achịkwa mmegide? Mba: Gụọ ebe a ọ bụghị ya! : Martin Vrijland
Martin Vrijland ọ na-achịkwa mmegide? Mba: Gụọ ebe a ọ bụghị ya!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 8 Ka 2019	• 2 Comments
Bart Nijman, onye nchịkwa editọ-na-achị Geenstijl, nwetara ngbochi na Twitter ụnyaahụ. Ihe Mere? Ọ kpọrọ maka Eurosceptic ịme ntuli aka. O kwuru na ọ na-abụkarị n'ụlọ. Eziokwu ezighi ezi, n'ihi na Geenstijl akpọtụbeghị ka ọ ghara ịme ntuli aka. Anyị na-ahụ ọtụtụ ihe na-eme ebe a dịka na United States na igbochi nke ebe nrụọrụ weebụ na-achịkwa achịkwa Infowars.com na Facebook site n'izu gara aga. Ka ayi nyochaa ot'esi aru.
O siri ike ịhụ site na egwuregwu nke mmegide a na-achịkwa, n'ihi na ọ dị mma ma na-agbagha. Ka ọ dị ugbu a, Facebook na-agbanyeghachi ihe mgbochi nke m kwupụtara. Ozi nke m na - enweghị ike ịkwasa site na 2 na May bụ na n'elu peeji m (lee ebe a). Nke a, n'aka nke ya, welitere ajụjụ ma Martin Vrijland n'onwe ya abụghị nanị mmegide a na-achịkwa. Kedu ka nke ahụ si arụ ọrụ n'ezie? M ga - asị: gwuo obere mmiri.
Ọ ga-aba uru ikiri ihe nkiri ahụ bụ Intrarotes (starring Bruce Willis) na nke a. N'ime ya ị na-ahụ otú onye okike nke surrogates (avatars robotic nke ihe ka ọtụtụ n'ime ọha mmadụ na-ebi na fim ahụ) na-etinye onye ndú ndị mmegide n'etiti ndị agadi na-ebi ndụ na ala ịta ahịhịa. Ndị ezigbo mmadụ bi na ụdị "zoo mmadụ". Ihe nkiri a na-egosi n'ụzọ doro anya otú i nwere ike isi chịkwaa mmegide site n'edu onwe gị.
Ma gịnị bụ iji mmegide a na-achịkwa? Gịnị mere ha ga-eji gbochi ha n'aka Twitter ma ọ bụ Facebook, dịka ọmụmaatụ? Ị na-ahụ oke mgbasa ozi nke na-eme? I kwesiri iji ya mee ihe. Dị nnọọ ka Wikileaks (Julian Assange) bụkwa ebe a na-achịkwa nnupụisi nke nwere ike ịchọta ozi banyere otú ị si ele ya anya (lee lee ihe mere). Ọbụna na mkpirikpi ntamu ma na-agbarịta ụka ị nwetarala na iji ya (na ihe accelerated ijeụkwụ). Nanị ihe ọ na-eme bụ ịgbatị usoro omume ahụ. Maka ọdịdị, a na-eme ụfọdụ nkwekọrịta ma gosipụta ihe ngosi mgbasa ozi, nke na-eme ka ị kwenyere na nledo niile ahụ dị na ndị mmadụ dị irè ma dị mkpa. Ka ọ dị ugbu a, locomotive ụgbọ mmiri ahụ na-agba ọsọ. Mmegide ndị a na-achịkwa na-ejikarị dị ka ụgbụ nchekwa. Na-agụ lee otú usoro aghụghọ ahụ dị ọrụ.
"Ma onye na-agwa m na ị bụghị onye na-achịkwa mmegide Free Country". Ọ bụrụ na ị jụọ onwe gị ajụjụ ahụ, biko lelee ya ma chọpụta onye ọ bụ naanị onye nọ na Netherlands ndị na-agwa maka egwuregwu nke mmegide a na-achịkwa n'ụzọ zuru ezu, aha kpọmkwem na onye na-eme njikọ; dị ka nke dị n'etiti FvD frontman Thierry Baudet na Ụlọ Akwụkwọ Clingendael na n'etiti Alex Jones na Micha Kat na Council for National Policy (CNP). Naanị ị ga - emerịrị nsogbu ị ga - amụ nke a. M ga-egosikwa gị otu m si bụrụ onye nweere n'efu (nke malitere na 2012) onye edemede nke onye ike na ndị otu ya wakporo. Ọ bụ onye a gbanwere kemgbe a ghọọ nwaanyị ma na-esote usoro nlekọta ịgwọ ọrịa uche. Gụọ gị isiokwu a na ihe dị mma. N'eziokwu, ọ dị oke nkpa doro anya, ọ bụrụ na ị nyochaa ya nke ọma.
Ihe mgbochi nke na-emekarị, dịka ndị na-ahụ na Micha Kat, ga-eme ka ọ dị ka ihe dị adị ma na-eme ka ha nwee ntụkwasị obi. Ma ọ bụrụ na ị hụkwuo nke ọma, ị ga-ahụ na ọgụ ndị a bụ ihe ọ bụla karịa sham na na dịka Micha Kat na-enwe olileanya na Chineke dị na France site na nkwari akụ na nkwari akụ; nke a na-akpọ "na ọsọ" maka "Demmink squads" na pedo-mafia. Ònye ga-akwụ ụgwọ maka nke ahụ? Ozugbo a kọchara akụkọ, ọ ghaghị ịnọgide na-asụgharị ya, ma ọ bụghị ya, usoro ụlọ ọrụ ụgha niile ga-ada. "Ee, ma a na-awakwa gị agha, gịnị mere na ọ bụghị nke a?"Ebe ọ bụ na enwere m nsogbu na mwakpo na ọ na-akwụ m ihe niile n'ụzọ nkịtị ma anaghị m esi n'ụlọ nkwari akụ gaa ụlọ nkwari akụ. E nwere ihe dị iche n'etiti mwakpo ndị na-akpata ihu ọma na mwakpo ọjọọ. Enwere m onye dị ka Kat ka m gosipụtara ya afọ ole na ole gara aga onye sitere n'aka ya kwụọ ụgwọ ya; gụnyere onye na-apụnara mmadụ ihe nke a mara ikpe bụ onye gaara eji mmekọahụ emekọ ihe na ụmụaka na-eto eto iji mee ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ukwu (Jack Abramoff) bie. Onye dị otú a ga-alụ ọgụ megide Demmink ọchịchị? Ahụhụ na-aghọ aghụghọ.
"Ee, ma gadverdamme, ọ dị oke njọ!" N'ụzọ dị mwute, eziokwu ahụ adịghị mma karịa mmeri Liverpool na Barcelona ma ọ bụ mmeri nke Ajax na-agbachitere ndị mmeri. A na-eji usoro mgbasa ozi na mgbasa ozi ndị ọzọ na-achịkwa n'azụ ebe ndị ahụ na-achọ iduzi ìgwè mmadụ na otu ntụziaka. Ọ bụrụ na ị na-ama ubu gị ma chee na "ọ ga-abụ oge m" ma ọ bụ "idei mmiri ahụ mgbe m nwụsịrị," ọchịchị ga-eme ka ọtụtụ ndị ọzọ nwekwuo ike ịnweta ụlọ mkpọrọ ma ọ bụrụ na ọ dị na ndụ gị. aka (ma ọ bụ ụmụ gị). Mgbe ahụ ọ dị mwute ikwu na oge.
Ya mere, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ onyinye dị mma iji gbanwee kama ịhapụ ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na n'ihu ndị mmadụ na mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ. Mkpebi ntụrụndụ Euro na-enweghị obi ụtọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa inye aka na-azụlite mmegide na ọha mmadụ. Ọ naghị arụ ọrụ na-agbaso ndị isi (nchekwa net). A na-azụchasị Pied Piper nke Hamelin ma nwee ọtụtụ. M dere n'oge na-adịbeghị anya isiokwu a banyere ihe ị nwere ike ime onwe gị. Biko gụọ ya ọzọ. Ọ bụ 1 nkeji iri na abụọ. Kedu ihe ị ga-enye ma ọ bụrụ na ụmụ gị jụrụ gị mgbe e mesịrị: "Mama ma ọ bụ Papa, gịnị ka ị mere iji gbochie nke a?"
Facebook na-egbochi ọtụtụ saịtị mgbasa ozi ọzọ dịka Infowars na ndị ọzọ: a kwukwara saịtị a
Ihe akaebe ndị ọzọ na-egosi mgbasa ozi ndị ọzọ a na-achịkwa site n'aka onye akaebe nke na-achọpụta Martin Vrijland (Naomi Hoogeweij)
Akaebe na ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi ọzọ dị ukwuu na-emegide mmegide
Thierry Baudet ga-eme ka Netherlands dị ukwuu! N'ezie!
Robert Jensen na Jensen nyochaa usoro ntinye nchekwa nke Infowars maka Netherlands?
Tags: machibido, Bart, Facebook, agba, egbochi, achịkwa, enweghị ụdị, hammering, ihe eji eme ihe, Kaiser, Martin, Micha, Nijman, mmegide, ugbua, profaịlụ, oke nkịta, Twitter, wepụrụ, Vrijand
8 May 2019 na 13: 00
Ajụjụ ikpeazụ n'isiokwu ahụ ma ọ bụ ihe dị mma onyinye?
Ụfọdụ ndị na-ahọrọ ịṅa ntị na ndị bi na ya.Anyị na-ekwu banyere usoro mgbasa ozi megalomaniac dị ka Telegraaf, NPO, n'ụzọ bụ isi (mgbasa ozi ọzọ) nke nwere ike ịgbasa mgbasa ozi nke iwu ahụ n'anya anyị, nnwere onwe nke okwu ha ha, ọ gwụla ma ị jụ ịkọ na ha dịka MartinVrijland mere, mgbe ahụ ị ga-apụ, a na-akatọ gị
Ihe atụ ọzọ dị mma:
Achọpụtara m na nso nso a na mmadụ na-anọchite anya posters.
Mpempe okporo ámá ọha na eze, ị maara ha, bụ ebe a mara ọkwa: n'ihi nnukwu ihe ịga nke ọma, onye agha nke Orange ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ nke ndị gụrụ ọnụ na-agba ọtọ na ndị ọzọ.
Ajụrụ m onye na-anọchite akwụkwọ akụkọ ahụ: "Ị na-adịghị eguzo mgbe ụfọdụ? n'azụ mbadamba nkume nke ị kwụlitere? nakwa na ị maara na ndị niile na-agafe agafe na-ahụ ya?
"Ọ zara ee! mgbe ahụ, ajụrụ m, "gịnị ka ị na-eme?" ka ọ na-ekwu, ọ dịghị ihe ọ bụla: M ga-ewere foto nke akwụkwọ mpịakọta ahụ ma gosi ya onyeisi m.
Oh, m na-ekwu ụdị akwụkwọ ọkwa ị na-achọghị ịkọ? ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke gba ọtọ na mgbasa ozi site na Wilders na ndị dị otú ahụ.
Ma, ọ na-ekwu na otu onye ọrụ ajụla na ozugbo ma bụrụ Muslim ma gbaa ya ọsọ.
Ma ọ na-ekwu, sị: "M ga-akwụ ụgwọ ụlọ m, ya mere", nke ọma: M ga-etinye ihe ọ bụla ha gwara m ka m kpọgidere n'okporo ámá.
Ya mere, ma n'amara na-eme ihe megide uche ya, ọ na-eme ya ... maka ego
M kwuru maka nwa oge ma ọ bụrụ na ị jụ ịkwado ya na nke ọzọ, mgbe ahụ, enweghi ndị na-ede akwụkwọ ọ bụla na mgbe ahụ, ha nwere ike ịmalite iche echiche, ee, ọ sịrị. M na-enyefe ndị ọrụ ibe m ya
Ian dere, sị:
8 May 2019 na 14: 08
Ee e, n'ezie ị bụghị Martin, Ekwenyesiri m ike na 100% nke ahụ. N'oge ijegharị na-arụ ọrụ, i wetara egwuregwu ahụ nke ọma. Otu usoro a na-achịkwa na Gijs, na otu ebumnuche bụ otú ọha mmadụ ga-esi kọwaa usoro ahụ. N'afọ ndị ahụ niile, enwebeghị m ike ijide gị na agbado abụọ, nke bụ okwu metụtara Oldenkamp na Kat, n'etiti ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị ụgha na-ekwu na ọha na eze na-ejiri aha ọjọọ na-agagharị, na Oldenkamp ọha na eze na-agagharị na nke ndị ala ọzọ, ka ndị mmadụ nọgide na-enwe obi ike na mgbasaozi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu. A naghị akọcha ma chebe ya na mgbochi ọ bụla nke mpụga nke na-eduga na ndị na-eche echiche ọjọọ, ndị na-agba chaa chaa, UFO site na Oldenkamp ma ọ bụ Kat. Ha na-egwu otu egwuregwu ahụ n'otu ụzọ ahụ ruo ọtụtụ afọ, nke na-emecha mee ka ọ ghara ịmatakwu (Ọdịdị Infinity Alfa / Omega).
" Ndị a na-eleghara anya na-eto eto Zaandam ọzọ a Nsogbu, Reaction, Ngwọta akụkọ?
Nzọụkwụ ọzọ nchekwa net: Patrick Savalle nkwekọrịta N'ezie site na Café Weltschmerz (ihe nakawa etu esi nke n'ịghọ aghụghọ ule) »
Nleta nile: 12.333.957
Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersma na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'okpueze okpueze'?
A ga - agha n'etiti US na Iran n'oge na - adịghị anya?
Ihe nlere mbụ Disney Channel kwuru na ndị pedophiles Hollywood metọrọ ya
Kpọ oku ngwa ngwa! Anyị ga-ewepụla usoro mgbasa ozi n'ọrụ ugbu a!
Martin Vrijland op Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersma na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'okpueze okpueze'?
2 igwefoto op Kedu ihe bụ eziokwu banyere ogbugbu nke Derk Wiersma na gịnị ka nke ahụ pụtara nye 'okpueze okpueze'?
Jikọọ ndị 1.635 ndị ọzọ debanyere aha